Abakhiqizi be-Magnet yokuDoba emaceleni amabili kanye nabaphakeli | Ukufika
Ngokususelwa kokusebenza kwayo, uzibuthe ohlangothini olubili ubizwa nangokuthi uzibuthe wokudoba we-Neodymium salvage onamandla amabili wokuzingela umcebo. Kuyisistimu kazibuthe emisha eyenziwe ngemagnethi yomhlaba ene-Neodymium enamandla kakhulu, ikesi lensimbi namabhawodi wamehlo asemqoka. Idizayini eyingqayizivele yenza uzibuthe omncane omncane wokudoba emaceleni omabili ukhiqize amandla amakhulu ukuba abe nohlelo olubanzi njengokudoba kukazibuthe, ukulenga, ukuphakamisa nokubuyisa izindatshana ezahlukahlukene eziqukethe insimbi.
Izici Magnet emaceleni
1. I-eyebolt yensimbi engashintsheki eshintshashintshayo: Lo mklamo unika amandla abasebenzisi ukuthi basebenzise izingwegwe zabo ezikhethekile esikhundleni sokuhlangabezana nohlelo lwabo olukhethekile.
2. Ukubophela okuphezulu phakathi kukazibuthe wesibhakabhaka kanye nowokudoba: Indandatho eyisipele inciphisa ubungozi bokwesekwa kwe-eyebolt nokulahlekelwa uzibuthe wokudoba.
3. Izinhlangothi eziheha kabili: Lo mklamo uyiphinda kabili le ndawo ngamandla kazibuthe, okuzokwenza ukuthi uzibuthe ofanayo osayizi bamacala amabili ukhulise amathuba okuzingela amagugu ngempumelelo
Ungawakhiqiza Kanjani Amagnet Asemaceleni Amabili
1. I-R & D kanye nokulingisa: Ngokuya ngemfuneko eyinkimbinkimbi yamakhasimende, kufanele singene kwinqubo ye-R & D ne-simulation, ukuthola izidingo ezinemininingwane zikazibuthe kufaka phakathi uzibuthe impahla, ukuma, usayizi, ukumboza kanye nebanga, insimbi yecala lensimbi nosayizi ofanayo, indlela yokuhlanganisa izinto, njll. Futhi-ke ukusampula kuyadingeka ukuqedela ukwakhiwa.
2. Ukukhiqiza uzibuthe we-Neodymium: Ngesikhathi senqubo yamagnet block, ukwakheka kukazibuthe nobuchwepheshe bokukhiqiza kufanele bulawulwe ngokuqinile, okucishe kunqume amandla okubamba nekhwalithi kamazibuthe wokudoba asohlangothini. Kwesinye isikhathi, ibanga likazibuthe kufanele libe ngaphezulu kunebanga eliphansi elifana ne-N35, ukuze ufinyelele amandla aphakeme adingekayo nosayizi omncane.
3. Ukukhetha insimbi yensimbi kanye ne-machining steel case: Izinto zecala lensimbi nazo zibalulekile ukuthonya amandla okudonsa, ngoba icala lensimbi kufanele lisize amandla kazibuthe womazibuthe womhlaba ongajwayelekile we-NdFeB ugxile enkabeni kuphela. Ngaphezu kwalokho, icala lensimbi lingavikela uzibuthe waphakade we-NdFeB ekuqhekekeni nasekuqhekekeni. Izinto zecala ziyinsimbi yekhabhoni ephansi.
4. Ukugcwalisa i-epoxy emnyama: Igebe eliphakathi kukazibuthe we-NdFeB necala lensimbi ligcwele i-epoxy emnyama, engalungisa uzibuthe we-Neodymium ebhokisini lensimbi ngokuqinile, bese ivikela i-disc Neodymium magnet ekuweni phansi bese inweba isikhathi sayo senkonzo.
1.Ikhwalithi ephezulu: Uzibuthe we-NdFeB, ingxenye ebaluleke kakhulu ikhiqizwa yifektri yethu, esenza sikwazi ukwenza ikhwalithi kamazibuthe ilawulwe.
2. Izindleko zisebenza kahle: Ukukhiqizwa ngaphakathi endlini kusenza sikwazi ukuqinisekisa uzibuthe wethu wokudoba ngekhwalithi efanayo kodwa ngentengo ephansi uma kuqhathaniswa nalabo esincintisana nabo.
3. Ukulethwa okusheshayo: Imikhiqizo eminingi eqediwe eqediwe esitokweni naphakathi kokuklama amandla kwenza ukulethwa kwangaphakathi nje kwesikhathi kukazibuthe wokudoba.
4. Izinketho eziningi: Izinketho eziningi ezijwayelekile ziyatholakala. Ngaphezu kwalokho, ukukhiqizwa kwethu ngaphakathi endlini nokwenziwa kwamakhompiyutha kunika amandla izinketho ezenziwe ngezifiso zezinhlelo zamagnetic zamakhasimende kalula. Singahlangabezana nokuthengwa okulula okukodwa.
Idatha Yezobuchwepheshe Yezibuthe Ezisemaceleni
Inombolo yengxenye D H M Phoqelela Isisindo sengqikithi Ubuningi bokushisa okusebenzayo
mm mm mm kg ama-lbs g ° C ° F
Langaphambilini I-Magnet Yesiteshi se-Neodymium
Olandelayo: I-Magnet Yokudoba Emaceleni Eyodwa